Kuchenesa kunosimbisa kuchengetedzwa kwemafoni ayo kuburikidza neVPN | Linux Vakapindwa muropa
Zvinotaridza sekunge mazuva ese, vashandisi uye makambani vanonzwisisa kukosha kwazvinoita zvakavanzika. Vhiki rino, Cloudflare ane yakaziviswa kuvhurwa kweWARP, yeVPN yemahara yemidziyo nhare iyo ichatibvumidza kusefa mukuchengeteka kwakazara. Ichi chinhu chaunoda kuita nekutadza Kuchenesa, kushandisa yakavanzika VPN kune ayo akachengeteka mafoni Linux-yakavakirwa. Izvi zvichave zvichibvira nekuda kwekambani kudyidzana neyakavanzika Internet Access.
Private Internet Access (PIA) ndeimwe yeinongedzo yepasirese kana zvasvika kuVPN, uye imo nekuti inotsigira VPN matekinoroji senge OpenVPN, PPTP, L2TP / IPsec uye SOCKS5. Purism yave yave yekutanga kambani kushamwaridzana neyakavanzika Internet Access kuti ipe yayo default services.
Librem 5, yekutanga Purism smartphone nePIA's VPN
Kuchenesa kunosanganisa Yakavanzika Internet Kuwana VPN masevhisi default pane yako PureOS inoshanda sisitimu, iyo Debian-yakavakirwa system. PureOS inouyawo yakaiswa nekusarudzika pamakomputa emakambani akadai seLibrem 13 kana Librem 15. Foni yekutanga kushandisa masevhisi aya ichave paLibrem 5, chishandiso chakarongerwa kuvhurwa mukota yechitatu ya2019.
Asi semushandisi anga achitsvaga mhando dzeVPNs mumavhiki apfuura, ndine mubvunzo mumwe chete: Kubatana uku kunoreva here kuti zvishandiso zvePurism zvichakwanisa kushandisa Private Internet Access VPN services zvemahara? Icho chinhu chavasina kutaura mu chinyorwa chinodzidzisa PIA kana Purism, asi ingangoita iri. Zvikasadaro, iyi nzanga yaisazoita zvine musoro.
Kune vashandisi vanoda kushandisa Yakavanzika Internet Kuwana VPN masevhisi, mutengo wayo uri pasi pe € 10 pamwedzi, € 6 / mwedzi pasi pekunyorera kana zvishoma zvishoma pane € 4 / mwedzi kana tikasarudza kunyorera kwemakore maviri. Iwe unofunga kuti chii chinonzi Purism chicha sanganisira masevhisi ePIA pamafoni avo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Kuchenesa kunosimbisa kuchengetedzwa kwemafoni ayo kuburikidza neVPN